Momba ny maha jiosy amin'izao androntsika izao sy amin'ny ankapobeny - Raby Michael Avraham
Momba ny maha Jiosy amin’izao androntsika izao sy amin’ny ankapobeny
Academics - 2014
"Mifoha maraina koa ny lehilahy iray ka mahatsapa fa vahoaka izy, dia mandehandeha."
Raha misy kibbutzim izay tsy mahafantatra ny atao hoe Yom Kippur, dia tsy mahafantatra ny atao hoe Sabata ary tsy mahafantatra ny atao hoe fanantenana. Ompiana ny bitro sy ny kisoa. Mifandray amin'ny rainy ve izy ireo?... Array? Zava-masina ve ny array? Efa niala tamin'ny lasantsika rehetra izy ireo ary mangataka Torah vaovao. Raha tsy misy ny Sabata ary tsy misy ny Yom Kippur, dia amin'ny inona izy no Jiosy?
(Ny lahatenin'i Rabbi Shach momba ny bitro, Yad Eliyahu, 1990)
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana tamin'ny andro nisian'ny fifampiraharahana bebe kokoa teo aminay sy ny Palestiniana, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nanakaiky kokoa ny fanontaniana momba ny maha-izy azy. Ny antony lehibe nahatonga ny fipoahana ho an'ny Isiraely dia ny fitakiana ny fanekena ny fanjakan'ny Isiraely ho fanjakana jiosy. Io fitakiana io dia mamaly, ankoatra ny zavatra hafa, amin'ny tohan-kevitry ny Palestiniana sy ny singa hafa, izay mitaky antsika voalohany indrindra hamaritra hoe inona sy iza no Jiosy eo imasontsika alohan'ny hitakiantsika izany amin'ny hafa. Amin’io toe-javatra io, ny sasany dia manolotra antsika ho taranaky ny Khazars, ka manimba ny maha-azo itokiana ara-tantara ny fitantarana jiosy, izany hoe, isika tokoa no fitohizan’ny voajanaharin’ireo Jiosy fahiny nonina teto amin’ny tanin’ny Israely. Etsy ankilany, ny Palestiniana koa dia manolotra ny maha-firenena ara-tantara (somary mamitaka) ho fototry ny tohan-kevitr'izy ireo. Nahita ohatra iray mahatsikaiky manokana aho tao amin'ny lahatsoratr'i Eldad Beck, izay mamaritra ny resaka nifanaovan'ny Minisitra Tzipi Livni, izay miandraikitra ny fifampiraharahana amin'ny Palestiniana amin'ny anaran'ny governemanta Israeliana, sy Saib Erekat, izay miandraikitra ny fifampiraharahana amin'ny lafiny Palestiniana. :
Talanjona ireo mpikambana ao amin'ny delegasiona Israeliana lehibe ao amin'ny Fihaonamben'ny Fiarovana Munich halina raha nisy mpikambana ao amin'ny ekipan'ny fifampiraharahana Palestiniana, Saeb Erekat, namely an'i Livni fa Kananita izy sy ny fianakaviany ary nipetraka tany Jeriko 3,000 taona (!?) Talohan'ny nahatongavany tao Bnei Israely teo ambany fitarihan’i Joshua Ben Nun. Nandritra ny fifanakalozan-kevitra momba ny fizotry ny fandriampahalemana any Afovoany Atsinanana izay nandraisan'izy roa anjara, dia nanomboka niresaka momba ny fitantarana ara-tantara samy hafa avy amin'ny andaniny sy ankilany i Erekat, ny Israeliana sy ny Palestiniana, ary nanamafy fa ny Palestiniana sy ny solontenany dia tena taranaky ny Kananita ary noho izany dia manana zo bebe kokoa amin'ny tany Palestiniana noho ny Jiosy. Namaly i Livni fa tsy tokony hanontany izay fitantarana marina kokoa i Israely sy ny Palestiniana, fa ny fomba hananganana ho avy. “Tsy amin’ny fomba romantika no ijereko ny fandaminana ny fandriampahalemana. Tsy latsa-danja noho ny hadalana ny fitenenan-dratsy. "I Israely dia maniry fiadanana satria mahasoa azy izany."
Ankoatra ny tohan-kevitra azo ampiharina, misy ny fahatsapana fa miezaka ny misoroka ity fifanakalozan-kevitra mahamenatra ity i Livni satria heveriny fa karazana fitantarana amin'ny ankapobeny ny maha-firenena, ary noho izany dia tsy misy dikany ny fifanakalozan-kevitra momba izany. Tsy misy ny mety na ny tsy mety eto, satria toy ny mahazatra ankehitriny ny fiheverana fa misy firenena iray manana ny maha izy azy ary tsy misy olon-kafa mahazo manao izany ho azy. Maro no hilaza fa na dia amin'ny maha jiosy aza dia misy lavaka feno fitantarana samihafa (na dia tsy mitovy amin'ny ohatra Palestiniana aza ny fatrany). Ny filazan'i Golda, Ben-Zion Netanyahu sy ny maro hafa, fa tsy misy ny Palestiniana, dia toa efa lany andro sy efa tranainy ankehitriny. Tsy noho ny zava-bita ara-tantara rehetra, fa satria ny olona sy ny zom-pirenena dia foto-kevitra izay voafaritra manokana.
Ny fanontaniana momba ny maha-izy azy, ara-tantara sy ara-kolontsaina, dia mandà tsy hamela antsika. Nitsangana izy ireo ary nanafika anay hatrany hatrany. Toa saika tsy misy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ny fanontaniana momba ny maha-firenena ny olona mampanahy ny olona toy ny teo amin'ny Jiosy, ary mazava ho azy koa ao amin'ny Isiraely. Mety ho hita ny adihevitra momba ny hoe Belzika tena izy ianao na tsia, fa indrindra ho fitaovana handresena ny mpanohitra, na ho anisan'ny tantaram-pitiavan'ny hetsika nasionalista nasionalista. Sarotra ny maka sary an-tsaina ny vondrona na olona iray miady amin'ny fisian'ny fanontaniana hoe Belzika, na Libiana, tena izy ary tena izy.
Raha raisina ho ohatra ny maha-izy antsika manokana, dia tsy misy amintsika tsy manapa-kevitra ny amin'ny hoe tena Michael Abraham aho, ary amin'ny inona marina aho no Michael Abraham? Inona no famaritana an’i Michael Abraham, ary mamaly izany ve aho? Ny maha-olona dia miharihary ary tsy mila famaritana. Toy izany koa ny momba ny maha-fianakaviana. Ny olona rehetra izay anisan’ny fianakavian’i Abrahama dia tahaka izany, ary izany no izy. Ny fanontaniana momba ny fepetra sy ny famaritana amin'ireo toe-javatra ireo dia toa miondrika. Mahazo fahatsapana aho fa amin'ny ankamaroan'ny firenena dia toy izany koa ny momba ny maha-pirenena. Teo fotsiny izy, ary izay ihany. Inona àry ny momba azy, amin'ny maha-Jiosy azy, izay manelingelina antsika foana? Azo atao ve ny manao dinika manorina sy manan-tsaina momba izany?
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka ny hamaritra ireo olana ara-teknika tafiditra amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny maha-Jiosy aho, ary manolotra famakafakana saina sy famakafakana priori amin'ny lafiny iray, momba ny olana sy ny dikany. Noho izany dia tsy hiditra amin'ny antsipiriany sy ny nuances aho mba tsy ho very ny sary lehibe, ary mamela ny tenako hampiasa famintinana izay toa mitombina amiko tsy mila loharano manokana, Torah na eritreritra ankapobeny. Ny filàko lohahevitra, ary indrindra ho an'ny politikan'ny fifandonana Israeliana-Palestiniana, dia tsy natao ho an'ny ady hevitra fa mba hanehoana ny filazana izay ho tonga amin'ny teniko. Tsy maneho hevitra eto ny momba ny disadisa sy ny fomba hamahana izany.
Ny fifanakalozan-kevitra ara-kolontsaina-filosofia sy ny fifanakalozan-kevitra halakhic-Torah
Manjavozavo ny foto-kevitra lehibe ao amin'ny lohatenin'ny fifanakalozan-kevitra, ny maha Jiosy. Ny fifanakalozan-kevitra momba izany dia azo atao amin'ny lafiny roa farafahakeliny: a. Ny maha-firenena jiosy amin'ny heviny filôzôfika-ara-kolontsaina. B. Ny maha jiosy amin'ny heviny Torah-halakhic (maro no tsy hanaiky mihitsy ny fiheverana fa dinika roa samy hafa ireo). Mazava ho azy fa mifamatotra amin'ny fanontaniana (tsy momba raha ny fahitako azy) na fivavahana na firenena ny Jodaisma, izay tsy horaisiko eto koa. Tsy fifanakalozan-kevitra roa samy hafa fotsiny ireo, fa maneho fomba roa samy hafa ny fifanakalozan-kevitra: na amin'ny rafitra ara-kevitra ankapobeny kokoa na amin'ny rafitra halakhic-Torah no hitarika ny fifanakalozan-kevitra.
Amin'ny ankapobeny dia mora kokoa ny mamaritra ny maha-olona ara-pivavahana noho ny maha-firenena azy. Izany dia satria ny maha-relijiozy dia mifototra amin'ny soatoavina sy fitsipika iraisana, ary indrindra amin'ny asa sy finoana vita fanoloran-tena (na dia amin'ny loko samihafa amin'ny fandikana aza. Tsy misy na inona na inona amin'ny fiainana dia tena tsotra). Mifanohitra amin'izany kosa, ny maha-firenena ny maha-firenena dia foto-kevitra amorphous kokoa, ary mifototra amin'ny tantara, faritany, kolontsaina, fivavahana, fiteny, toetra sasany sy ny maro hafa, na ny fifangaroan'ireo rehetra ireo. Matetika ny maha-firenena iray dia tsy mifandray amin'ny fitsipika ara-tsaina na azo ampiharina, ary azo antoka fa tsy amin'ny fitsipika manokana ho an'ny olona manokana. Saingy ny kolontsaina, ny fiteny, ny toetra ara-tsaina amin'ny karazana iray na hafa, dia miovaova sy manjavozavo, ary amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia azo zaraina amin'ny firenena hafa ihany koa. Ankoatr'izay, ny sasany amin'ireo toetra ireo dia miovaova, ary ny olona na orinasa iray dia mety manaiky na mandao ny sasany amin'izy ireo. Ka iza amin'ireo no fepetra ilaina amin'ny maha-firenena ny firenena?
Toy izany koa ny toe-javatra eo amin’ny tontolon’ny Jiosy. Tena mora ny mamaritra ny maha Jiosy ara-pivavahana. Ireo izay tsy maintsy mitazona ny mitzvos dia manana ny maha-Jiosy azy. Firy ny mitzvos tokony hotandremana? Fanontaniana sarotra kokoa izany, ary mihasarotra kokoa izany amin'ny taranaka saro-pady misy antsika, saingy fanontaniana faharoa. Ny fanoloran-tena amin'ny foto-kevitra amin'ny mitzvos dia famaritana ampy ho an'ny filantsika. Ambonin'izany, amin'ny teny halakhic, ny fanontaniana momba ny maha-izy azy, na dia ny fivavahana aza, dia tsy misy dikany. Misy famaritana halakhic mazava tsara momba ny karazana adidy ara-pivavahana rehetra, izay iantefan'izy ireo sy izay ifatorana. Ny fanontaniana momba ny maha-relijiozy dia tsy mipoitra mivantana eo amin'ny tontolon'ny foto-kevitra Torah-halakhic.
Raha ny momba ny maha-relijiozy dia tsy misy lanja halakhic amin'ny fanontaniana, dia mora sy ara-materialy izany raha ny momba ny maha-pirenena. Inona no voka-dratsin'ny fahatapahan-kevitra fa manana zom-pirenena jiosy ny vondrona iray? Ao amin'ny halakhah, misy dikany ny fanontaniana hoe iza no mandinika na tsy mitandrina mitzvos, ary mainka fa ny fanontaniana hoe iza no tsy maintsy mitandrina na tsy mitandrina azy ireo. Ny fanontaniana momba ny maha-izy azy dia tsy manana valiny halakhic mazava, ary tsy misy fiantraikany halakhic mivantana ho azy manokana.
Amin'ny fomba fijery halakhic, ny Jiosy dia olona teraka tamin'ny reny jiosy na niova fo marina. Izany no maha-izy azy amin'ny heviny halakhic, ary tsy maninona izay ataony, ary indrindra raha mitazona na tsy mitazona mitzvos izy. Mazava ho azy fa tsy maintsy manaraka an'ireo izy, ary azo atao ny miady hevitra raha mpanao heloka bevava izay tsy manao izany ary inona no tokony hatao aminy. Tsy misy dikany anefa ny fanontaniana momba ny maha izy azy. Ny andian-teny toy ny hoe "nivoaka avy tamin'ny Isiraely rehetra" dia sarin-teny matetika, ary tsy misy dikany azo ampiharina amin'ny halakhah. Ary na dia misy dikany aza izy ireo, ny halakhah dia mamaritra azy ireo araka ny fepetra ara-teknika.
Identité Nationale: Ny maha samy hafa ny fifanarahana sy ny tsy mety
Hatreto dia niatrika ireo fanontaniana momba ny maha-izy azy avy amin'ny fomba fijery halakhic-religious izahay. Amin'ny fomba fijery filozofika ankapobeny, ny maha-firenena ny maha-firenena azy no tena mahaliana azy fa tsy ny momba ny fivavahana. Efa nolazaiko teo fa hevitra manjavozavo sy sarotra hamaritana ny maha-pirenena amin’ny ankapobeny. Eto aho dia hifantoka indrindra amin'ny pôlisy faran'izay henjana mifandraika amin'ny famaritana ny maha-pirenena: ny consensual (conventionalist) ary ny essentialist (essentialist).
Ny fanontaniana momba ny nasionalisma sy ny maha-pirenena dia fanontaniana vaovao ary tena maoderina. Taloha, noho ny antony samihafa, dia zara raha nanontany tena ny olona hoe inona ny maha-firenena azy sy ny fomba hamaritana izany. Nilamina kokoa izao tontolo izao, tsy nanao fiovana firy teo amin'ny fiainany ny olona, ​​ary zara raha voatery niatrika ny maha-izy azy tamin'ny maha mpifaninana azy. Mampisalasala raha nisy hevitra miavaka momba ny maha-firenena azy tao amin'ny fahatsiarovan-tenany, ary na dia nisy fiovana teo amin'ny maha-izy azy aza dia tonga ho azy sy ho azy ary tsy nahatsiaro tena. Voajanahary ny maha-pirenena, mitovy amin’ny maha-olona sy fianakaviana voalaza etsy ambony. Nanampy ny olona ho liana koa ny fivavahana, satria nanana ny maha-izy azy ny ankamaroan’ny olona. Tany amin’ny tany teo aloha dia nisy ny fiheverana fa fanomezana avy amin’Andriamanitra ho an’izay nateraka ho mpanjaka ny maha-mpanjaka, ary toy izany koa ny maha-firenena sy ara-pivavahana misy antsika ary ny fifandraisantsika aminy. Ireo rehetra ireo dia noforonina niaraka tamin’izao tontolo izao tao anatin’ny enina andro tao amin’ny Genesisy, ary noraisina ho toy ny zava-boaary sy noraisim-potsiny.
Amin'izao vanim-potoana maoderina izao, miaraka amin'ny firongatry ny nasionalisma any Eoropa sy amin'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny, dia nanomboka nitsinkafona tanteraka ny fanontaniana. Ny fahasarotana amin'ny famaritana ny maha-firenena dia niteraka valiny izay matetika eo anelanelan'ny roa tonta: ny voalohany dia ny conventionaliste izay mahita ny maha-pirenena ho toy ny zavatra mifototra amin'ny fifanarahana saika tsy misy antony. Raha vao mahita ny tenany ho vahoaka ny vondrona iray, fara faharatsiny raha maharitra elaela, satria vahoaka izy io. Ny poeta Amir Gilboa, tamin’ny 1953, taorian’ny nananganana ny fanjakana, dia namaritra izany toy izao: “Mifoha maraina ny lehilahy iray ka mahatsapa fa vahoaka izy ka manomboka mandeha”. Ny tsato-kazo hafa dia fomba fijery manan-danja izay mahita ny maha-pirenena ho zavatra voajanahary sy voarafitra, toy ny maha-olona azy. Rehefa manontany tena bebe kokoa momba ny toetran'ilay singa "voajanahary" saro-takarina, zom-pirenena, ny romantika indraindray dia tonga amin'ny metafizika. Araka ireo fomba fiasa ireo, ny zom-pirenena dia manana ny fisian'ny metafizika amin'ny lafiny iray, toy ny hevitra Platonika, ary ireo olona mandrafitra ny firenena dia tafiditra ao anatin'io fikambanana io noho ny fifandraisany amin'ny metafizika amin'izany. Ny soavaly tsirairay dia an'ny vondron-tsoavaly tsy mila mamaritra mazava ny atao hoe soavaly. Soavaly fotsiny izy, ary izay ihany. Toy izany koa, ny Belzika rehetra dia ao anatin'ny vondrona Belzika nefa tsy misy famaritana. Tsy hoe satria sarotra ny manolotra famaritana, fa satria tsy ilaina izany. Ny maha-pirenena dia foto-kevitra voajanahary mitovy amin'ny maha-olona sy fianakaviana.
Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny tenin'i Amir Gilboa mamaritra ny fifohazana nasionaly dia mety ho nosoratana tao anatin'ny rafitry ny fiheverana metafizika manan-danja ihany koa, fa eto dia fifohazana amin'ny traikefa, izay ny zava-misy metafizika iray izay natory teo aloha dia miditra ao amin'ny fahatsiarovan'ny olona. . Mifoha ao anatin’izy ireo izany ary tian’izy ireo ny ho tonga amin’ny fampiharana, amin’ny lafiny ara-politika sy ara-tsosialy andrim-panjakana. Mifoha tampoka ny olona iray ary mahatsapa ny zava-misy metafizika (izay marina hatrizay) fa olona izy, ary manomboka mandeha. Ao amin'ny tantaram-pitiavan'ny fifohazam-pirenena ny lehilahy dia nitsangana tamin'ny heviny hoe nifoha tamin'ny tsy fahatsiarovan-tena, mifanohitra amin'ny fiheverana iraisan'ny fo izay nitsanganany dia adika ho fiakarana avy amin'ny tany hanombohana ny diabe. Mipetraka ny adi-hevitra raha fifohazana sa fananganana ny fananganana.
Identité nationale: ny fomba ifanarahana sy ny fanehoana azy
Eo amin'ny lafiny fifanarahana amin'ny sarintany dia misy mpandinika toa an'i Benedict Anderson, ao amin'ny bokiny manan-kery Fiaraha-monina eritreritra (1983), ary maro hafa no nanaraka izany. Ireo dia mandà ny fisian'ny votoaty tena ilaina amin'ny foto-kevitra toy ny zom-pirenena sy ny maha-pirenena. Ireo manana io fomba fiasa io dia mahita ny zom-pirenena ho karazana tantara foronina tsy misy dikany izay noforonina sy voavaly amin'ny fahatsiarovan'ny vondrona sasany nandritra ny tantarany (matetika nozaraina). Tsara hotadidina fa tsy midika akory izany hoe tsy mitombina izany fifohazana izany, na azo tsinontsinoavina ny fitakiana sy ny fitakiany. azo antoka fa tsy. Ny maha-pirenena dia misy ho zava-misy ara-psikolojika ary manan-danja amin'ny olona, ​​ary noho izany dia maro no mino fa mendrika ny hajaina izany. Saingy amin'ny ankapobeny dia zavatra tsy misy dikany izany. Mba hanamafisana ny hevitr'ity fomba fiasa ity dia hamela ahy ny mpamaky raha hanokana fehintsoratra vitsivitsy momba ny raharaha ankehitriny aho.
Ohatra mibaribary amin'ny fomba fiasa izay an'ny sekoly ifanarahana ny fijerin'ny Prof. Shlomo Zand. Zand dia mpahay tantara avy ao amin'ny Oniversiten'i Tel Aviv, izay anisan'ny faribolana Compass teo aloha ary anisan'ny faribolana ankavia radikaly ao Israely. Ao amin'ny bokiny mampiady hevitra Oviana ary tamin’ny fomba ahoana no namoronana ny vahoaka jiosy? (Wrestling, 2008), Zand dia nisafidy ny hamakafaka ohatra iray izay manohintohina manokana ny thesis an'i Benedict Anderson. Miezaka manaporofo izy eo fa fiaraha-monina an-tsaina ny Jiosy. Ity asa ity dia tena fatra-paniry laza, na inona na inona hevitray momba ny toerana misy an'i Anderson, raha misy ohatra ao amin'ny tontolo (tandrefana) izay mifanohitra tanteraka amin'ny thesis nataony dia ny vahoaka jiosy. Eny tokoa, raha ny hevitro (sy ny hevitry ny maro hafa) dia manome anarana ratsy ho an'ny fikarohana ara-tantara ny bokin'i Zand, ary indrindra manohintohina ny fanavahana fototra sy manan-danja toy izany eo amin'ny ideolojia sy ny fikarohana akademika. Fa ny mamela azy hanao izany rehetra izany dia ny manjavozavo ny foto-kevitry ny maha-pirenena.
Raha manohy ny zava-mitranga ankehitriny isika, ohatra mazava tsara avy amin'ny tsato-kazo hafa, izay manamafy tsara ny fomba fijerin'i Anderson, dia ny vahoaka Palestiniana. Ny Palestiniana dia vahoaka izay miorina mazava tsara amin'ny maha-izy azy an-tsaina (izay indraindray dia ahitana fahatsiarovan-tena foronina, toy ny an'ny Filistina na ny Kananita ara-Baiboly, na hatramin'ny taona taloha kokoa aza), Saika noforonina avy amin'ny tsy misy amin'ny lafiny ara-tantara.
Misy dikany ny manamarika eto ny fomba fijery mahazatra amin'ny fiheverana marimaritra iraisana. Eo am-piandohan'ny bokiny dia nanokana ilay boky i Zand: "Ho fahatsiarovana ireo mponina ao al-Sheikh Muanis izay nafindra toerana tamin'ny lasa lavitra tamin'ny toerana misy ahy sy miasa amin'izao fotoana izao." Manoritsoritra sy milamina ny tonony, ary toa tsy hitany ho olana izany. Raha toa ny maha-firenena ny maha-pirenena azy dia eritreretina, dia ny maha-imaginary iray no manosika ny iray hafa. Tonga izy ary manjavona. Izany no fomban’izao tontolo izao. Araka ny filazany dia zava-misy ara-psikolojika ireo fa tsy soatoavina metafizika na fahamarinana, na dia fahamarinana ara-tantara aza. Io no lafiny ilany amin'ny sandam-bola mahazatra izay mahita ny maha-pirenena ho toy ny sary an-tsaina.
Ny fehin-kevitra dia hoe raha ny maha-firenena ny maha-firenena azy dia fifanarahana ara-dalàna tsy misy dikany, dia misy fehin-kevitra ambany (na dia tsy voatery aza) roa (na dia tsy voatery) aza: 1. Tsy manana zo marina ireo fikambanana ireo. Ny firenena dia zavaboary tsy misy hazon-damosina, izay tsy manana fiainana ivelan'ny fisainan'ny olona. 2. Tafiditra ao anatin’ny maha-izy azy ny olona maro ny maha-firenena ary raha ny marina dia tsy misy maha-firenena hafa (marina amin’ny ankapobeny), ka ny maha-izy azy dia tsy midika fa ny fitakiana sy ny fitakian’ny sampan-draharaha toy izany dia azo atao. atao ambanin-javatra.
Amin'ny fomba mahagaga, vitsy ny olona manana io fomba fiasa io no mamela ny tenany hampiasa azy io mba hitsikerana ny maha-izy azy (raha ny momba an'i Zand, Isiraeliana-Jiosy) ary miampanga azy ireo ho nanafintohina fivoriambe ara-tsosialy tsy misy antony sy nosaintsainina, namorona ny tenantsika ho fantatra, ary amin'ny amin'ny fotoana mitovy amin'ny fomba fijery mitovy.Ny maha-izy azy an-tsaina hafa (ilay Palestiniana, ao amin'ny ohatry ny Zand). Ny hadalana dia vao mainka miharatsy noho ny hoe ny vahoaka jiosy indrindra no ohatra faran'izay tsy mahomby ary ny vahoaka Palestiniana no ohatra mazava indrindra amin'ny fanindrahindram-pirenena. Mbola averiko ary hamafisiko fa tsy mikasa ny hiresaka momba ny fifandraisana sahaza amin’ny fitakian’ny vondrom-piarahamonina toy izany ho fankatoavana ara-politika aho, satria fanontaniana normative-value-politika izany. Eto aho dia tsy miresaka afa-tsy ny famaritana ara-kolontsaina sy ny fanakianana ny tsy firindrana eo amin'ny fifanakalozan-kevitra.
Identité nasionaly: Ny fomba fiasa tena ilaina
Hatreto aho dia nijoro tamin'ny conventionalism sy ny olana misy azy. Angamba noho ireo fahasahiranana ireo indrindra no mahatonga ny sasany mitondra ny foto-kevitry ny maha-pirenena ho any amin'ny sehatry ny metafizika. Ny fifohazana nasionaly any Eoropa, ary koa ny fifohazana nasionaly jiosy izay hita taratra tamin'ny hetsika Zionista ary voataonan'ny romantika nasionaly Eoropeana. Matetika ireo hetsika ireo dia maneho ny heviny fa ny fanindrahindram-pirenena dia miorina amin'ny zavatra metafizika sasany (ny vahoaka, ny firenena). Ny fanehoana tafahoatra an'io fomba fijery io dia miseho amin'ny fomba fiteny fasista (any Alemaina an'i Hitler, Bismarck, sy ny maro hafa alohan'izy ireo, ary koa ny any Italia an'i Garibaldi sy ny maro hafa). Ireo fihetsika ireo dia naseho tao amin’ny eritreritry ny Torah an’i Raby Kook sy ny mpianany. Izy ireo dia nandray io hevitra metafizika io, ary nataony ho fototry ny finoana jiosy. Ny pitik'afo jiosy, manjavozavo, nafenina, nolavina ary nopotehina, na izany aza, no mamaritra ny Jodaisma ho an'ny olona iray. Ny hasin’ny Isiraely sy ny maha-tokana ny Jiosy tsirairay avy amin’ny fototarazony, dia saika ho fepetra manokana ho an’ny Jodaisma, indrindra rehefa nanjavona ny toetran’ny fomban-drazana rehetra (fanajana), na fara faharatsiny nitsahatra tsy ho fitambarana iombonana nifanarahana. Ny "Knesset of Israel" dia nivadika avy amin'ny metapora ho fanehoana ontolojikan'ny hevitra metafizika jiosy.
Asehoko eto ny fomba fiasa mavesa-danja ho setrin'ny consensual, fa eo amin'ny axis ara-tantara dia mazava fa ny conventionalism (na dia tsy metafizika foana aza) dia nialohavan'ny conventionalism. Ara-tantara, dia fomba fanao mahazatra no nipoitra ho setrin'ny fomba fijery manan-danja. Raha ny fomba essensisista dia tena fantatra amin'ny modernisma sy ny fifohazana ny nasionalisma, dia ny conventionalism dia anisan'ny "critique vaovao" post-national izay fantatra amin'ny toerana antsoina hoe postmodernism.
Ny paradox fototra
Hatreto dia nofaritako ireo hevitra roa mifanohitra. Aiza izy ireo no mifandona? Inona no maha samy hafa azy ireo? Heveriko fa amin'ity ambaratonga ity isika dia ho gaga. A priori ireo manana ny fomba fiasa faharoa, ny tena ilaina, dia tsy afaka mitady famaritana ny maha-pirenena. Raha ny marina, araka ny filazan'izy ireo, na iza na iza manana fifandraisana amin'ny hevitra metafizika (Knesset of Israel) dia Jiosy. Na dia ao anatin'ny ady hevitra momba ny fiovam-po aza dia mandre hatrany ny hevitra momba ny "taranak'Israely" ho fototry ny fitakiana ny fanamorana ny fizotry ny fiovam-po, ary tsy mahagaga raha avy amin'ny faribolana akaiky an'i Raby Kook izany. Ny metafizika no mamaritra antsika ho Jiosy, ary noho izany dia afaka amin'ny filana famaritana fandaharana isika. Ho an'ny tantaram-pitiavana metafizika, ny maha jiosy dia zava-misy empirika izay tsy miankina amin'ny atiny, ny soatoavina, na ny fepetra hafa. Mazava ho azy fa ireo manana toe-tsaina toy izany dia mety mino fa ny Jiosy tsirairay dia tsy maintsy mitandrina ny soatoavina sy ny mitzvos ao amin'ny Torah, fa tsy misy ifandraisany amin'ny famaritana ny maha-Jiosy sy ny maha-izy azy.
Mazava ho azy, na dia araka ny foto-kevitra iankinan'ny metafizika aza dia azo aroso ny toetra samy hafa amin'ny maha-firenena jiosy, saingy amin'ny fijerin'izy ireo dia toetra mifanentana ireo, izany hoe tsy zava-dehibe amin'ny tanjona hamaritana ny firenena. Na ireo izay tsy mitandrina azy ireo aza dia Jiosy noho ny maha-izy azy ny hevitra metafizika jiosy. Na dia tsy nampoizina aza, ny fanontaniana momba ny maha-izy azy dia vahiny amin'ny fisainana mahazatra.
Amin'ny lafiny iray, ireo manana fomba fijery mahazatra, ireo izay tsy mino ny tantaram-pitiavana metafizika, dia mila famaritana bebe kokoa, fepetra ary toetra izay ahafahan'izy ireo mitsara hoe iza no manana io maha-firenena io ary iza no tsy manana izany. Izany no mahatonga azy ireo manontany tena hoe nahoana izahay no Jiosy. Raha tsy metafizika dia inona? Saingy tsy mahita famaritana azo tsapain-tanana toy izany ny conventionalists, ka tonga amin'ny fiheverana ny maha-izy azy. Maro amin'izy ireo no mandray famaritana izay toa tsy fitohizana voajanahary amin'ny maha-Jiosy araka ny hita tamin'ny an'arivony taona talohantsika. Ny famakiana ny bokin’i Amos Oz, ny fitenenana hebreo, ny fanompoana ao amin’ny tafika ary ny fandoavana hetra mendrika ho an’ny fanjakana, ny nenjehina tamin’ny Fandripahana Tambabe, ary angamba koa ny nahazoana tsindrimandry avy tamin’ny loharanon’ny Torah, no toetra mampiavaka ny maha Jiosy ankehitriny. Amin'izany dia tsy maintsy ampiana ny tantara iombonana sy ny tetiarana. Tena zava-misy io ary io ihany no tena mampiavaka ny Jiosy amin'izao androntsika izao (na dia tsy izy rehetra aza). Raha izany no izy, dia karazana zava-misy ihany koa ny maha-firenena azy, toy ny amin'ny fomba metafizika, afa-tsy ny eto dia zava-misy ara-psikolojika-tantara fa tsy zava-misy metafizika.
Misy fanontaniana roa mipoitra mifandraika amin'ny fomba fanao mahazatra:
Amin’ny heviny ahoana no maha-fanohizana ny fisehoany teo aloha io maha-firenena io? Raha ny maha-izy azy fotsiny no fototry ny fitohizana dia tsy ampy izany. Tsy maintsy mamaritra ny vondrona aloha isika ary avy eo vao afaka manontany hoe inona ny toetrany. Fa raha mbola tsy misy ny toetra dia ahoana no hamaritana ny vondrona? Fanontaniana mipetraka tsy misy vahaolana mahafa-po izany, ary tsy misy vahaolana mahafa-po amin'izany ao amin'ny sary ifanarahana. Araka ny nambarany dia na ireo tompon’ny toerana tena ilaina aza dia tsy manana vahaolana amin’io fanontaniana io, afa-tsy ny tsy miraharaha azy ireo mihitsy.
Tena "manao asa" tokoa ve ireo famaritana ireo? Rehefa dinihina tokoa, ireo famaritana ireo dia tsy tena mahazaka fitsapana mitsikera. Eritrereto ireo fanovana voalaza etsy ambony. Ny fitenenana amin’ny teny hebreo dia azo antoka fa tsy voatery hanavaka ny Jiosy, ary etsy an-danin’izany dia betsaka ny Jiosy tsy miteny hebreo. Na ny fifandraisana amin’ny Baiboly aza tsy mba toy izany (ny Kristianisma dia mifandray lalina kokoa amin’izany, ary maro ny Jiosy tsy mifandray amin’izany mihitsy). Ny fandoavana ny hetra sy ny raharaha miaramila dia azo antoka fa tsy voatery ho mampiavaka ny Jiosy (Druze, Arabo, mpiasa mpifindra monina ary olom-pirenena tsy jiosy hafa dia manao izany tsara kokoa). Mifanohitra amin’izany, fa vitsy ny Jiosy tsara fanahy tsy manao izany, ary tsy misy misalasala ny Jodaisma. Vakina eran-tany i Amos Oz sy ny Baiboly, na dia tsy amin’ny fiteny tany am-boalohany aza. Etsy an-danin’izany, ny zavatra vita an-tsoratra nosoratana tany Polonina dia mifandray amin’ny Baiboly koa amin’ny Jiosy? Dia inona sisa?
Tsara ho marihina eto fa tena misy tokoa ny toetran’ny Jiosy, araka ny azo lazaina momba ny toetra iombonan’ny firenena maro hafa. Saingy tsy mitovy amin'ny firenena ny toetra amam-panahy. Ankoatra izany, raha te hiresaka momba ny toetra iray dia tsy maintsy mamaritra aloha ny vondrona izay nomena azy. Raha ny marina, dia misy olona maro eto amin'izao tontolo izao izay nomena toetra izay mety ho tafiditra ao anatin'ny famaritana ny toetra jiosy, nefa tsy hisy hilaza fa Jiosy izy ireo. Rehefa fantatsika hoe iza ny Jiosy dia vao afaka mijery ny antokon'ny Jiosy isika ary manontany raha misy toetra mampiavaka azy ireo. Misy koa ny tantara jiosy sy ny niaviany, saingy zava-misy fotsiny ireo. Sarotra ny mahita ny lanjany amin'ireo rehetra ireo, ary tsy mazava ny antony mahatonga izany rehetra izany ho toy ny olana misy sy ho toy ny zavatra mila famaritana. Marina tokoa fa mitovy ny fiaviany sy ny tantarany amin'ny lafiny sasany ny ankamaroan'ny Jiosy. De maninona? Misy toerana ve ny fitakiana olona iray ho Jiosy, araka ny tetiarana sy ny tantara? Raha toy izany izy dia toy izany, ary raha tsy izany dia tsy.
Raha izany no izy, na dia lasa mivelatra be aza isika, dia mbola sarotra ny manondro ny mari-pamantarana maranitra amin'ny maha-Jiosy nasionaly amin'ny heviny ara-bakiteny amin'ny fomba ifanarahana. Angamba isika tokony handray ny fomba ekena amin'ny diagnostika ara-tsaina (ary indraindray koa ara-pitsaboana), izay midika fa ny fisian'ny toetra sasany avy amin'ny lisitra nomena dia mamaritra famaritana mahafa-po ny maha-Jiosy? Araka ny efa nasehoko etsy ambony dia sarotra ny mahita izany ho criterion mahafa-po koa. Afaka manome lisitra toy izany ve isika? Misy afaka manazava ve ny antony itakiana ny enina amin’ireo toetra ireo fa tsy ny fito na dimy? Ary ambonin’ny zavatra rehetra, tena hahomby tokoa ve io fepetra io amin’ny fanavahana ny Jiosy sy ny tsy Jiosy amin’ny fomba azo itokisana? Mazava ho azy fa tsy izany (jereo ny ohatra etsy ambony).
Noho io toetra manahirana io, maro amin'ireo conventionalistes no miverina eto amin'ny sehatry ny génétique halakhic, izay midika fa mitady ny maha-Jiosy azy ao amin'ny reniny koa izy ireo. Ny hafa hanantona izany amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny olona iray: ny Jiosy dia izay mahatsapa sy manambara ny tenany ho Jiosy. Ny circularity sy ny fahabangana amin'ity famaritana ity dia tsy tena manelingelina ny conventionalistes. Ny fifanarahana dia vonona ny hanaiky ny fivoriambe rehetra, na boribory izany na tsy misy dikany isaky ny misy. Ny maha-ara-dalàna azy dia noho ny nifanarahan’izy ireo tamin’izany. Saingy antenaina fa ho vonona hametraka ny maha-izy azy amin'ny fepetra an-tsaina ny vondrom-piarahamonina an-tsaina. Ankoatra ireo tohan-kevitra rehetra ireo, dia mbola zava-misy izany na hevitra poakaty, izay azo antoka fa tsy manazava ny fihenjanana misy manodidina ity olana ity.
Rabi Shach tamin'ny lahateniny voalaza etsy ambony dia manafika ny famaritana ny maha Jiosy, ary manao izany amin'ny teny halakhic. Amin'ny ankapobeny dia maneho karazana toerana manan-danja izy io, saingy tsy voatery ho metafizika (ny maha-firenena azy amin'ny resaka fanoloran-tena amin'ny soatoavina sasany). Wikipedia 'Ny kabarin'ny bitro sy ny kisoa' dia manoritsoritra ny fihetsiky ny Rebbe an'i Lubavitch manoloana ny kabarin'ny bitron'i Rabbi Shach toy izao manaraka izao:
Ny Lubavitcher Rebbe', Bar Plugata Ny Raby Shach nandritra ny taona maro, dia namaly ny lahateny tamin'ny lahateniny manokana, izay nataony taoSABATA Taty aoriana tao amin'ny beit midrash azy. Nilaza ny Rebbe fa tsy misy mahazo miteny manohitra ny vahoaka jiosy. Ny fomba fijerin'ny Jiosy dia ny hoe "Israely, na dia ny fahotan'ny Isiraely aza," dia ny Zanak'Isiraely no "zanak'Andriamanitra tokana". לו Ary izay miteny amin'ny fanamelohana azy dia tahaka izay miteny amin'ny fanamelohan'Andriamanitra. Ny Jiosy tsirairay dia tsy maintsy ampiana amin'ny fitazonana ny zavatra rehetra DIDINY Fivavahana, fa tsy mamely azy mihitsy. Ny Rebbe dia namaritra ny mpiara-belona taminy ho "Udim aloky ny afo", ary "Zazakely voasambotra“, Mba tsy homena tsiny izy ireo noho ny fahalalany sy ny fihetsiky ny Jodaisma.
Ity dia ohatra iray amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny karazana metafizika. Tetsy ankilany, ny filoha tamin'izany fotoana izany, Haim Herzog, dia naneho ny valin-tenin'ny mpandala ny nentin-drazana tamin'ny tenin'i Raby Shach, rehefa nanontany tena izy hoe ahoana no mety hisian'ny maha-Jiosy an'ireo kibbutzniks an'ny Kubilniks sy ny gadra izay nanorina ny fanjakana sy nanompo tao amin'ny tafika tamim-pahafoizan-tena lehibe. nanontaniana. Inona àry no omanin-dRaby Shach? Tsy manaiky ny metafizika izy, ary tsy vonona ny ho conventionaliste. Misy safidy fahatelo ve?
Tsy misy ve ny hevitra tsy voafaritra?
Ny fanatsoahan-kevitra miharihary dia ny hoe tsy azo faritana ny foto-kevitry ny maha-firenena jiosy. Mazava ho azy fa azo atao ny manolotra famaritana samihafa, samy araka ny ambaratongam-pamoronany, saingy azo antoka fa tsy azo atao ny mifanaiky amin'ny famaritana iray, ary farafaharatsiny ho an'ny ankamaroan'ny vondrona dia toa tsy manilika ireo izay tsy mahafeno ny famaritana azy izy ireo. Israely rehetra (raha mbola Jiosy ny reniny). Midika ve izany fa tsy maintsy eritreretina ny maha-izy azy, izany hoe tsy tena misy ny maha-Jiosy? Ny hany safidy ho an'ny metafizika na halakhic formalism ve no fitantarana? Tsy azoko antoka.
Ity fanontaniana ity dia mitondra antsika any amin'ny sehatra filozofika fa tsy misy toerana hidirana eto, ka hiezaka ny hikasika azy ireo vetivety aho. Mampiasa teny maro manjavozavo izahay, toy ny zavakanto, ny rationality, ny siansa, ny demokrasia ary ny maro hafa. Saingy rehefa manatona hamaritana ny foto-kevitra toy izany isika dia miatrika olana mitovy amin'ireo voalaza eto. Maro no manatsoaka hevitra avy amin'izany fa sary an-tsaina ireo hevitra ireo, ary manangana manodidina azy mihitsy aza ny lapa postmodern kanto (tsy kisendrasendra ny fifandraisan'ny hevitra amin'i Rabbi Shagar). Ohatra mazava amin’izany ny bokin’i Gideon Ofrat, Ny famaritana ny zavakanto, Izay manolotra famaritana am-polony maro momba ny foto-kevitry ny zavakanto ary mandà izany, mandra-pahatongany amin'ny farany fa ny zavakanto dia izay aseho ao amin'ny tranombakoka (!). Etsy ankilany, Robert M. Piersig, ao amin'ny bokiny momba ny fivavahana Zen sy ny zavakanto fikojakojana môtô, Mitantara ny dian'ny mpampianatra kabary atao hoe Phydros, izay mikatsaka ny hamaritana ny foto-kevitry ny kalitao. Amin'ny fotoana iray dia mandalo fahazavana izy, ary nanatsoaka hevitra fa ny filozofia grika dia nahatonga antsika hieritreritra fa ny hevitra rehetra dia tsy maintsy manana famaritana, ary ny hevitra tsy misy famaritana dia tsy misy tsotra izao (eritrereto izany). Saingy ny hevitra toy ny kalitao dia mety tsy azo faritana, nefa tsy manaiky ny fanatsoahan-kevitra izy fa hevitra tsy misy votoaty tena izy. Fivoriambe fotsiny. Mazava tsara fa misy ny fifandraisana tsara ary misy ny tsy manao izany. Mitovy amin'izany koa, misy ny asa kanto ary misy ny sanda ara-javakanto ratsy. Ny fehin-kevitra dia hoe mbola misy ihany ny hevitra toy ny kalitao, na ny zavakanto, na dia sarotra sy tsy azo faritana aza. Tsy voatery ho sary an-tsaina izy ireo.
Toa azo atao koa ny filazana mitovitovy amin’izany eo amin’ny sehatry ny maha-pirenena. Afaka manaiky ny tesis tena ilaina fa misy ny maha-pirenena tsy mila metafizika. Ny maha-firenena ny maha-pirenena azy dia samy manana ny toetrany ary sarotra ny manolotra famaritana azy, kanefa tsy voatery ho an'ny saina na fifanarahana izany, ary tsy voatery momba ny metafizika. Mety ho hevitra tena izy amorphous izay sarotra na tsy azo faritana. Amiko dia misy famaritana mitovitovy amin'izany no fototry ny fiheveran'i Rabbi Shach (na dia manolotra famaritana halakhic aza izy, ary tsy manaiky ny mety hisian'ny famaritana nasionaly hafa). Manamafy izy fa misy famaritana tena ilaina ny maha-Jiosy, ary na dia ny fitakiana avy amin'ny filazan'ny olona mifototra amin'izany aza. Etsy ankilany, tsy heveriny ho safidy mahafa-po ny metafizika. Raha ny tenako dia tsy mirona hieritreritra izany aho. Raha tsy misy metafizika dia tsy hitako hoe ahoana no ahafahan'ny olona miresaka momba ny firenena iray amin'ny heviny ontolojika. Saingy mazava amiko fa maro no tsy mitovy hevitra amiko momba izany.
Hatreto aloha ny filozofia. Izao anefa no tonga ny fanontaniana manaraka: Nahoana no zava-dehibe izany rehetra izany? Nahoana isika no tokony hamaritra, na hiezaka hahatakatra mihitsy aza, ny maha Jiosy? Ny valinteniko dia tsy misy dikany izany. Tsy misy dikany io fanontaniana io, ary ny ankamaroany dia resaka famakafakana ara-tsaina (matetika tsy misy dikany, ary mety tsy misy votoaty mihitsy aza). Raha toa ka manota amin'ny psikolojian'ny seza iray aho, ny fitadiavana ny maha-Jiosy dia fanehoana ny fanoloran-tena amin'ny fivavahana sy ny tantara jiosy nefa tsy vonona ny hampihatra izany. Ny olona dia mitady fomba hafa ho an'ny maha-izy azy izay nivavaka taloha, mba hahafahan'izy ireo mahatsapa ho Jiosy taorian'ny fandroahana ny maha-izy azy sy ny fanoloran-tena ara-pivavahana. Ho an'izany dia misy fanontaniana vaovao sy hevitra vaovao noforonina, ary ezaka lehibe sy tsy misy dikany no atao amin'ny famaritana azy ireo.
Raha ny hevitro dia tsy misy fomba hiresahana momba ny adihevitra manan-tsaina momba ny maha Jiosy, ary azo antoka fa tsy hanapa-kevitra momba izany, izay tsy dia zava-dehibe ihany koa. Raha convention izany dia maninona no miady hevitra momba ny fifanarahana. Samy hanao sonia ny fifanarahana izay miseho aminy. Raha metafizika no resahina dia tsy hitako izay hidirana amin'ny adihevitra sy adihevitra. Ary na dia manaiky hevitra manan-danja momba ny maha-Jiosy (mifanohitra amin'ny halakhic) aza isika, dia tsy azo idirana amin'ny famaritana, hiadian-kevitra, ary azo antoka fa tsy amin'ny fanapahan-kevitra nifanarahana. Tolo-kevitra semantika ireo, maro amin'izy ireo no tsy mitombina, ary ny hafa dia tsy misy afa-po tanteraka, na tsy mahazaka ny fitsapana amin'ny fahamendrehana. Ankoatra izany, araka ny nomarihako, izany rehetra izany dia tsy misy dikany azo ampiharina na inona na inona. Adin'ny olona amin'ny tenany ireo, ary tsy misy hafa.
Io tohan-kevitra tsy ilaina sy tsy manan-danja io izao no ampiasaina voalohany indrindra hamely ny mpanohitra. Na iza na iza te hampiroborobo ny hevitra sosialista - dia manazava amintsika rehetra fa ny Jodaisma dia sosialista hatramin'izay, ary izay tsy tahaka izany dia tsy Jiosy. Ny hafa liana amin’ny hevitra miaramila koa dia mampideradera ny Jodaisma sy ny maha Jiosy azy. Toy izany koa ny demokrasia, ny fitoviana, ny kapitalisma, ny fahafahana, ny fisokafana, ny fanerena, ny fiantrana sy ny hatsaram-panahy, ny rariny ara-tsosialy, ary ny soatoavina ambony rehetra. Raha fintinina, ny Jodaisma dia fahazavana ho an'ny Jentilisa, fa ny toetran'io hazavana io dia tsy azo iadian-kevitra amin'ny fototra sy tsy azo antoka. Tsy toy ny resabe hafa, izay mety ho fomba hanazavana ary mety hisy vidiny ihany koa, ny adihevitra momba ny maha-Jiosy dia amin'ny foto-kevitra dia tsy voavaha ary tsy misy dikany amin'ny lafiny rehetra.
Ny zavatra iray dia mazava tsara amin'ny lojika: tsy misy amin'ireo lisitry ny soatoavina ireo (sosialisma, militarisma, rariny ara-tsosialy, fitoviana, fahalalahana, sns), na sanda hafa, afaka mahaforona singa tena ilaina, ilaina na ampy amin'ny famaritana ny a. maha Jiosy. Na iza na iza mino ny iray amin'ireo soatoavina ireo na ny fitambaran'izy ireo dia mety ho jentilisa raitra amin'ny hevitra rehetra sy tsy iadian-kevitra. Tsy misy sakana ho an'ny jentilisa sosialista, manohana ny fitoviana na ny fahafahana, na miaramila na tsia. Noho izany, ireo rehetra ireo dia tsy fepetra manan-danja amin'ny maha Jiosy azy, na dia mitranga aza ny tsy mampino (ary aza matahotra, mety tsy hitranga izany) ary misy olona afaka manaporofo amin'ny fomban-drazana sy loharano jiosy fa ny iray amin'ireo dia tena anisan'ny fandaharan'asa momba ity famantarana ity.
Ny maha Jiosy amin’izao androntsika izao
Fehiny, zava-poana sy tsy misy dikany ny adihevitra momba ny maha-pirenena. Araka ny efa nolazaiko teo dia mitovy amin'izany koa ny momba ny maha-relijiozy azy. Na iza na iza teraka reny jiosy na efa niova fo araka ny tokony ho izy, dia tsy maintsy mitandrina ny didin’ny Torah sy ny tenin’ny olon-kendry ka tsy mandika lalàna. dia izay. Ny famaritana ny olona, ​​ny maha-izy azy, ary ny anana hafa, dia zavatra manan-danja, ary mety ho ara-tsaina, metafizika, conventionalist, na mety ho tena ilaina amorphous (tsy voafaritra). Mety ho marina daholo ny zavatra mety hitranga, ka tsy misy dikany koa ny miresaka momba izany.
Andeha hojerentsika hoe inona no mety ho vokatry ny dinika toy izany? Fa hisy hahafa-po hoe Jiosy tsara izy? Ny fahatsapana ho tsara dia olana ho an'ny psikology. Ny fifanakalozan-kevitra momba ny maha-izy azy amin'ny dikany dia tsy misy dikany ary tsy ilaina. Raha misy hevitra mivaingana omena izay liana amin'ny famaritana ny maha-izy azy, dia azo atao (angamba) ny miresaka momba ireo fanontaniana mifandraika amin'izany. Fa raha mbola dinika ankapobe ihany dia samy hamaritra ny Jodaisma araka izay tiany. Na dia marina aza ny iray ary diso ny iray, dia tsy tokony hahaliana na iza na iza io fanontaniana io, afa-tsy ireo mpikaroka akademika vitsivitsy izay mivelona amin'ny fanadihadiana semantika toy izany. Etsy ankilany, iza moa aho no hitsabaka amin’izany ezaka feno herim-po sy zava-poana izany? Sisyphus dia anisan'ny maha-kolotsaina antsika koa…
 Eldad Beck avy any Alemaina, YNET, 1.2.2014.
 Ny fizotry ny fanavakavaham-bolon-koditra dia miteraka olana momba ny maha manam-pahaizana momba ny fivavahana (midika ve izany hoe Protestanta, Silamo, na Katolika, laika?).
 Raha miresaka famaritana isika, dia tena zava-dehibe ny toetry ny mitzvos resahina sy ny antony manosika ny fitandremana azy ireo. Na dia mitaky fitondran-tena ara-moraly aza ny lalàna, dia azo inoana fa tsy mamaritra ny Jodaisma amin’izany fototra izany satria mahazatra ny rehetra eran-tany. Na dia mitzvot toy ny fametrahan'i Eretz Yisrael aza, izay tsy ara-moraly, dia tsy afaka mamaritra ny maha-Jiosy ara-pivavahana, satria misy koa amin'ireo izay tsy mamaritra ny tenany ho anisan'ny fivavahana jiosy, satria matetika ny antony manosika. fa avy amin'ny toerana iray ihany ny fisiany.
 Na dia dingana iray ihany koa aza ny fiovam-po izay mampiady hevitra toy ny olana halakhic maro hafa, dia ampy ho an'ny filantsika izany.
 Tsy nanakana ny boky tsy ho voadika amin'ny fiteny roapolo sy hahazoany loka maneran-tany izany.
 Jereo, mitanisa ny taratasin'i Eldad Beck voalaza etsy ambony.
 Raha ny fahatsiarovan-tena tsara indrindra, ny filoha Haim Herzog tamin'izany fotoana izany, tamin'ny valin-teniny tamin'ny kabarin'ny bitro, sy ny maro hafa mandraka androany, dia nilaza io "marika" io. Na iza na iza manana fahatsapana lojika kely dia gaga amin'ity trangan-javatra mahavariana ity. Tiantsika ny hamaritra ny foto-kevitra jiosy, ary manao izany amin'ny fomba manaraka: ny a rehetra azo apetraka amin'ny toeran'ny X amin'ny endrika manaraka: "X izay nahatsapa X" ary ny famaritana dia tonga marina, dia jiosy. Araka io famaritana io dia jiosy daholo ny zavaboary mahatsinjo tena ka tsy mandainga (jereo ny groupe placement).
 Azo heverina fa tsy maintsy takatsika koa ny fanatsoahan-kevitr’i Gideon Ofrat tetsy ambony. Angamba tsy milaza izy fa tsy misy ny atao hoe zavakanto, fa mamintina fotsiny fa tsy ilaina sy tsy misy vokany ny resaka momba izany.
3 Hevitra momba ny "Identité jiosy amin'ny androntsika sy amin'ny ankapobeny"
H. Bayer 22 - 04/2018/21 amin'ny 59:XNUMX
Ho afaka hanazava ny note 7 indray ve ny raby?
H. Bayer 23 - 04/2018/07 amin'ny 06:XNUMX
Rehefa mamaritra ny Jiosy ho toy ny olona mihevitra ny tenany ho Jiosy ianao dia tsy niteny na inona na inona. Ny teny ampiasaina amin'ny famaritana dia tokony ho fantatry ny taloha sy tsy misy azy. Ka raha ataontsika hoe X ilay teny hoe jiosy ka mila hazavaina ny famaritana azy, dia amin'ny ankapobeny ny voalazanao amin'io famaritana io dia hoe ny jiosy dia X izay mihevitra azy ho X.
19 Tamoza 07 - 2019/10/26 amin'ny XNUMX:XNUMX
tsy manaiky aho. Mba hamantarana fitaovana tsy voafaritra mihitsy. Ao amin'ny Kabbalah dia misy famaritana ny hoe avy amin'Andriamanitra sy ny tselatra sns. Raha mbola miteny amin'ny Torah manjavozavo ny olona iray dia famaritana tsy misy dikany izany. Misy tokoa ny famaritana. Fa tsy hitondra azy aho izao. Ny tsy ampy amin'ny famaritana dia midika fa tsy misy fitsipika mampiray ny tsirairay hamantatra ny iray. Ary noho izany dia tsy misy maha-izy azy ho an'ny rehetra. Misy nafkamina ho an'ny maha Jiosy. Satria ny tena fahitako ny tenako ho jiosy ary tsy isalasalako ny maha Jiosy ny hafa. Amin'izany dia mampifandray ny tenako aminy aho ary rehefa manao fihetsika iray aho ary mamaritra izany ho toy ny fihetsika jiosy, dia hoy aho hoe Jiosy, anisan'ny soatoavina jiosy ny manao ireo fihetsika ireo. Tsy voatery ho marina izany satria ny saka ohatra dia mitondra tena maotina nefa tsy anisan'ny fivavahan'ny fahamaotinana nefa ny olona iray dia manana ny fahaizany mitondra tena toy ny alika sy mihinana amin'ny tany noho ny faniriana hanatratra tanjona hafa. Na dia mifanohitra amin'ny natiora aza ny lalana nofidiny.
Raha tena mahita ny tenany ho Jiosy vaovao ilay Jiosy ka manalavitra ny maha-Jiosy azy, dia tsy hampiasa ny Lalàn’ny Fiverenana intsony, ohatra, ny iray hafa. Indrindra raha any ivelan'ny andrim-panjakana toy ny fanjakana jiosy no atao. Fa rehefa tapaka ny fifandraisana dia atao hoe firaisana ara-nofo ary araka ny lalàna jiosy dia tokony ho faty ankolaka.
Koa raha samy mihevitra ny tenantsika ho Jiosy isika. Na eo aza ny tsy fitovian-kevitra dia misy zavatra iray iraisantsika rehetra izay mahatonga antsika tsy hanary ny famaritana jiosy. Ary ny fifaneraserana dia mifandray amin'ny Jiosy rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tsy famaritana ara-dalàna izany satria na ny Jiosy tsy manaiky ny lalàna aza dia manaiky izany. Izany no famaritana ny fomba fiaina tian’ny Jiosy rehetra. Famaritana misy fanehoana eo amin'ny fiainany amin'ny maha-Jiosy azy izany na dia eo am-pikarohana izany famaritana izany fotsiny aza. Na ahoana na ahoana, io no ivon'ny sandany. Na amin'ny fikasana hahatsapa izany na amin'ny fikasana tsy hiraharaha izany amin'ny heriny. Satria toe-tsaina koa izany. Amin'ny lafiny iray, ny soatoavina izay tsy misy fifandraisana aminy dia tsy mandà izay tsy eritreretiny mihitsy ary tsy mitantana fifandirana.